QAADASHADA XIRIIRKA MACMIILKA - Milyan Sameeyayaal. Waxaan bixinaa xalal kuwaas oo ugufiican macaamiisheena. ballan qaadka xiriirka macmiilka, xiriirka macmiilku wuxuu ballan qaadayaa milyan sameeye, xiriirka macmiilka wuxuu u ballan qaadayaa mm xalalka inc, mm xalalka, mm xal inc, mm s
BALANTA XIRIIRKA MACMIILKA
JOOJINTA XIRIIRKA MACMIILKA - QAADAYAASHA MILYAN
Waxaan si toos ah adeegyo ugu siineynaa ama iskaashatooyinkeena iyo isku xirnaanta dhammaan adduunka oo dhan ujeedkeenuna waa had iyo jeer inaan bixino qiimaha ugu jaban adeeg kasta laakiin adeegyada (yada) iyo wadamada qaarkood waxaa laga yaabaa inaan qaali noqon karno 5% - 15% marka la barbar dhigo kuwa ugu jaban ee bixiya adeegyada wadankaas laakiin waxaan hubineynaa in dhammaan adeegyadayada si sax ah loo hubiyo, loo cusbooneysiiyo oo daacad loo ahaado, sida, annaga Bixiso kaliya adeegyada ugu fiican uguna waxtarka badan oo kaliya kaas oo ka caawiya macaamiisheenna inay waqti, lacag iyo ilo kaleba badbaadiyaan iyagoo helaya tan ugu wanaagsan, sidaa darteed, macaamiisheennu waligood kama qoomameyn doonaan inay waqtigooda, maalkooda iyo hantidooda ku lumiyeen.
Waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan ku bixinno sida ugu macquulsan uguna macquulsan qiimaha ugu hooseeya.
Khibradeenna, waxaan ku ogaaneynaa in qanacsanaanta macmiilkayagu iyo guusheena ay tahay guusheena. Ballanqaadka xiriirka macaamiisha ee Million Makers macaamiisheenna waa sida soo socota:
Waxaa laguguula dhaqmi doonaa si xushmad iyo ixtiraam leh is dhexgalka aad nala sameyso.
Arimaha la xiriira Socdaalka, macmiilka waxaa siinaya la-talin qareen, mas'uuliyad weyn, sharaxaad faahfaahsan, iyo jawaabaha weydiimaha macmiilka.
Arrimaha la xiriira sameynta shirkadda iyo furitaanka xisaabta bangiga, macmiilka waxaa siin doona la-talin la-taliye ganacsi oo xirfad leh, mas'uuliyadda ugu weyn, sharraxaad faahfaahsan, iyo jawaabaha weydiimaha macmiilka.
Qiimayn daacad ah oo salka ku haysa shuruudaha iyo sharaxaadda wixii ikhtiyaarro ah ee jira.
Kuma talineyno adeegyada kaliya in aan soo saarno khidmad.
Haddii macmiilku doorto inuu sii haysto adeegyadeena, waxaan u dirnaa heshiis Lacag oo qoran oo qeexaya shuruudaha adeegyada.
Haddii aad dooratid inaad sii haysatid adeegyadeenna, markaa macmiilku sidoo kale wuu oggol yahay inaan dib loo soo celin wixii khidmad ah ee lagu bixiyey adeeg kasta. Waxaan had iyo jeer bixinaa adeegyo daacad ah mar alla markii adeegga la bixiyona ma jirto waddo looga laaban karo maadaama kuwani ay yihiin adeegyo xirfadle ah oo aan la qiyaasi karin dibna loogu celin karin wax soo saar kasta.
Macaamiisha leh khidmadaha “khidmadda fidsan” waxay bixiyaan hal khidmad si loo daboolo dhammaan adeegga lagu sharaxay Heshiiska Khidmadda. Lacag dheeraad ah kama qaadno telefoonnada, emaylka, ama shirarka. MAYA NAXDIN or KHARASHKA DHEERAADKA la-tashiyo dheeri ah, haddii loo baahdo.
Wareysiga socdaalka haddii loo baahdo, kulanka diyaarinta wareysiga oo lala yeesho qareen ayaa kujira khidmadayada.
Wareysiga furitaanka akoonka bangiga haddii loo baahdo, kulanka qiimeynta wareysiga ee la-taliyaha ganacsiga / qareenka ayaa lagu soo daray khidmaddayada.
Weydiimaha Macaamiisha saaran waxaa badanaa looga jawaabaa 1 maalin ganacsi ama xitaa kahor waxay kuxirantahay farqiga waqtiga.
Waxaan ku siineynaa fursad guul adiga oo soo bandhigaya daryeelka ugu fiican ee suuragalka ah habka ku habboon.